Ejypta: Milaza ny Tantarany Ireo Bilaogera Nogadraina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Marsa 2018 3:38 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Deutsch, Español, English
Bilaogera Ejiptiana 20 mahery teny an-dalana hanome voninahitra ny fianakavian'ireo niharam-boina tamin'ny famonoana ireo kôpta no voasambotra raha tonga tao an-tanànan'i Naga Hammady ao Ejypta ny fiara-dalamby nandehanan'izy ireo. Noafahana ry zareo fotoana fohy taorian'izay ary milaza ny tantarany amintsika.
Manoritra indray ny tanjon'ny dia i Dr Mostafa Al Naggar, tompon-kevitra tamin'ny fitsidihana:
Vondrona mpikatroka Ejiptiana sy bilaogera tsy mifandray amin'ny antoko na hetsika na iza na iza izahay. Teny an-dalana hanome ny teny fiaraha-miorinay ho an'ireo rahalahy Kôpta izahay ary hanome voninahitra ny fianakavian'ireo niharam-boina – izany no antony tokana sy voalohany ny fitsidihanay. Nanasa ireo namana bilaogera vitsivitsy sy mpikatroka zon'olombelona aho ary nanaiky izahay rehetra fa fitsidihana maha-olombelona madiodio ity fa tsy deradera ara-baovao.
Nahazo antso izy alohan'ny nandehanana:
Nahazo antso tsy fantatra anarana aho; nanontany ilay mpiantso raha Dr Mostafa Al Naggar aho, nanontany aho hoe iza izy, ary nilaza tamiko izy mba hiraharaha ny asako manokana ary nilaza tamiko koa mba tsy handeha any Naga Hammady. Hoy izy: “Mikarakara zavatra iray rahampitso ny antoko ary tsy mila olon-kafa izahay.” Nanontaniako izy hoe Antoko inona no tiany resahina, saingy napetrany ny finday ary tsy noraharahiako ny antso.
Rehefa tonga izy ireo, dia nohodidinin'ny polisy ka tahaka izao ny resadresaka nifanaovan'ny manampahefana sy Dr Al Naggar:
Nanakaiky kokoa aho ary nanontany azy hoe: Inona no olana?
Hoy izy: Tsy misy! Teneno fotsiny ireo mpiara-miasa aminao mba hiditra alohan'ny hanerenay azy ireo.
Hoy aho taminy: Nahoana? Inona no nataonay no hanaovana anay tahaka izany? Tonga haneho fiaraha-miory izahay ary hiala avy eo.
Nijery ahy tamin'ny tsiky maneso izy ary niteny hoe: Fiaraha-miory? Voasambotra ianareo rehetra! Andao!
Sahiran-tsaina avokoa izahay rehetra ary nanontany ahy i Marian hoe inona no olana ary tsy nahateny aho.
Nanatona manamboninahitra aho ary nilaza taminy hoe: Avelao hody any an-trano ny tovovavy ary hiaraka aminareo izahay.
Nikiakiaka tamiko izy niteny hoe: Mihevitra ve ianao fa manan-tsafidy?! Miaraka aminay ianareo rehetra!
Nentina tany amin'ny tobin'ny polisy Nagaa Hammady izahay ary avy eo nentina tany amin'ny governoran'i Qena, toerana nanagadrana anay tamin'ny efitrano roa samihafa; ny iray ho an'ny lehilahy ary ny iray ho an'ny vehivavy.
Mba hiresahana ny vono olona sy ny fisamborana tsy ara-dalàna, Mahmoud Saber nandefa rohy tao amin'ny bilaoginy sy tao amin'ny Facebook manambara ny:
Hetsika Ejypsiana ho an'ny Fifanarahana Manokana momba ny Zo.
Ahmed Badawy nandefa sary vitsy ato sy nizara ny zava-niainany, hoy izy:
Nisy manamboninahitra iray manokana tonga nitsidika anay matetika miaraka amin'ny tsikitsiky lehibe eo amin'ny endriny; Milaza aminay foana ny tantaran'i Josefa sy ny fomba nigadrany nandritra ny 7 taona sy ny fiainana feno olana, loza – ary tsy maintsy mizaka ny lozany izahay.
Sherif Abdel Aziz nibilaogy ny fijoroany vavolombelona:
Rehefa nanapa-kevitra handeha ho any Nagaa Hammady aho, ny fanapahan-kevitra noraisiko dia noho izaho nanoka-tena tanteraka hiady amin'ny fizarazarana ara-pivavahana sy ny antony. Te hiezaka hampionona ireo ray aman-dreny nidonam-pahoriana aho, izay namoy ny havan-tiany tamin'ny loza mahatsiravina. Te hamihina ny tànan'ireo niharam-boina tsy manan-tsiny aho ary hizara ny fanaintainany sy ny alahelony. Fantatro fa tsy hisy na inona na inona hamerina indray ny maty saingy te hilaza amin'izy ireo aho fa Silamo aho ary tsy mankasitraka ny zava-nitranga!
Wa7da Masrya namoaka ny sarin'ilay polisy nisambotra azy ireo ary nitaraina noho ny fampijaliana nataony:
Mandritra izany, Amira El Tahawi namoaka sary avy ao anatin'ny efitranony ao amin'ny fonja. Nahita graffiti nosoniavin'i El Kamony, izay toa iray tamin'ireo mpitifitra tamin'ny vono olona izy ireo; hoy ny voasoratra:
Raha heloka bevava ny fiarovana ny fahamarinana, dia ela velona ny tontolon'ny heloka bevava
Mohamed Adel (Ameed Meit), namoaka ny sarin'ireo bilaogera taorian'ny famotsorana azy ireo ary Amira El Tahawi nandefa sary tao amin'ny Facebook izay mamintina ny fijerena diso:
Ny sary dia vaovao roa avy ao amin'ny gazety Al Naba'a – ny iray (ankavia) manondro ireo kristiana maty ho toy ny “niharam-boina”, ny iray (ankavanana) manondro ny Silamo maty ho toy ny “maritiora”.
Tahaka ny olon-drehetra, manontany tena i Sandmonkey hoe Inona no Nitranga Tao!
Araka izany, nanapa-kevitra hamotsotra ireo mpikatroka nogadraina amin'ny Asabotsy ihany ny governemanta nony farany, ary tonga tao Kairo ny Asabotsy alina izy ireo, salama tsara ny rehetra. Tsy nisy ny daroka, tsy nisy ny fampijaliana, raha toa ka tsy maintsy mandany andro sy alina manontolo ao anaty efitrano kely iray tsy misy na inona na inona hatoritoriana sy hipetrahana amin'ny fampijaliana […] Ny ampitso maraina, natao ny filaharan'ny famotsorana ireo mpikatroka, ary nisafidy izy ireo mba tsy hilaza izany amin'ireo mpikatroka. Navelan'izy ireo teo hatramin'ny tolakandro fotsiny izy ireo, ary avy eo nandeha sy namoaka azy ireo tao am-ponja, nametraka azy ireo tao anaty fiara, ary nalefany niverina tany Kairo. Salama, avotra sy reraka izy rehetra. Mbola tsy nahazo fanazavana mikasika ny antony nanaovana azy ireo toy izany izy ireo, ary tsy mba nahita ny fianakavian'ireo maty akory izy ireo mba hanolotra fiaraha-miory. Ny fahitana Silamo mampionona ireo fianakavian'ireo Kristiana niharam-boina noho ny heloka fankahalana nataon'ny Silamo, dia be loatra mety hitera-doza kokoa. Mety hampihena ny fankahalana izany na zavatra, ary tsy afaka ny hanana izany isika!